संशोधन विधेयकमा मंगलबार मतदानः पास होला कि फेल ? यस्तो छ अंकगणितीय खेल
काठमाडौं, साउन २७ । संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमाथिको थप प्रक्रिया मंगलबारदेखि अघि बढ्ने भएको छ । शुक्रबार सरकार–राजपाबीच संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने र राजपा चुनावमा सहभागी हुने सहमति भएपछि सरकारले मंगलबारको संसद बैठकमा संशोधन विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागेको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरुको सहमतिबेगर नै संशोधन प्रस्ताव अघि बढनउन लागेकाले विधेयक पारित हुने हो वा होइन अनिश्चित छ । यद्यपि, राजपाले संशोधन विधेयक फेल भए पनि चुनावमा भाग लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छ ।
राजपासँगको सहमतिपछि सरकार जसरी पनि संशोधन विधेयक दुई तिहाई बहुमतले पारित गराउने गरी अघि बढेको छ भने प्रतिपक्षी दलहरु जसरी पनि फेल गराउने गृहकार्यमा जुटेका छन् । तर, संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई पुर्याउने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
यस्तो छ अंकगणितीय खेल
संविधान संशोधन पारित हुन सदनमा तत्काल कायम कुल सदस्य संख्या ५९३को दुई तिहाइ अर्थात् ३९६ मत आवश्यक पर्छ । संसद्मा संशोधनको विपक्षमा एमालेका १८१, राप्रपा नेपालको २०, नेकपा मालेका ५, नेमकिपाका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, परिवार दलका २ र नेपा पार्टी (बौद्धिक परिषद्), बहुजन शक्ति र मधेस समता दलको एक÷एक गरी २१८ सिट छ ।
संशोधनको पक्षमा सत्तारूढ कांग्रेसको २०७, माओवादी केन्द्रको ८१, राष्ट्रिय जनता पार्टीको २५, संघीय समाजवादी फोरमको १५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४ र नेकपा संयुक्तको ३ र बाँकी १० सिट साना दलको गरी ३५५ सिट छ । फुटेको राप्रपाको १७ सिट जोड्दा पनि ३७२ हुन्छ । जबकि दुई तिहाई पर्याउन ३९६ मतको आवश्यकता पर्छ ।
यसमा दुबै पक्षको मत जोड्दा कुल संसद संख्याको भन्दा पनि बढी हुन आउछ । किनकि, यो दलहरुको दाबीका आधारमा लगाइएको भागबण्डा हो । यसले पनि संकेत गर्छ कि, संशोधनको पक्ष वा विपक्षमा स्पष्ट मत छैन । मंगलबारसम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले गर्ने छेलोफड्कोले मात्रै संशोधन विधेयक पास हुन्छ या फेल हुन्छ ? भन्न सकिन्छ ।